Fluorescent Powder, Fampivoana Photoluminescent - Grand Luminous
Ny vokatra mampiavakaNy vokatra mampiavaka
Fanamarihana fivoahana luminescent misy marika / lu ...
Jeneraly Luminescent Jade Ary Luminescent Jade's A ...
Vary manjelanjelatra manjelanjelatra miavaka fehin-kibo ...
Jiro mipiratra Luminescent ho an'ny rafitra mandositra vonjy maika
Mamirapiratra amin'ny maizina (Fiber) / karaoty ao amin'ny Dar ...
Horonan-tsary Photoluminescent vaovao
Manome vahaolana ho an'ny luminescent
Manome vahaolana tetikasa luminescent Mifototra amin'ny fametrahana ny teknolojia an-taonany maro amin'ny famokarana sy fampiharana ny akora milina lava amin'ny lava-byglow dia afaka manome vahaolana ara-teknika feno ho an'ireo mpanjifa amin'ny indostria isan-karazany sy ny sehatry ny antoka isika Ny tahan'ny fahazoana ny vokatra vita dia 100% fahafaham-po an'ny mpanjifa: 96% Ny tahan'ny fitsapan-kevitry ny mpanjifa dia ny 100% fiarovana amin'ny tontolo iainana Mifototra amin'ny teknolojia avo lenta sy ny famolavolana orinasa, ny haingo antsika, ...
Izahay no safidy tsara indrindra hividiananao fitaovana luminescent any Sina
Izahay no safidy tsara indrindra hividiananao fitaovana manjelatra ao Shina 1. Mifantoka amin'ny fitaovana manjelanjelatra ihany izahay. Manana traikefa matihanina mihoatra ny 15 taona amin'ny fitaovana manjelanjelatra isika. Manana fahaiza-manao amin'ny fitaovana manjelanjelatra izahay. Ny tanjaka koa dia fitaovana manjelanjelatra. 2, Ho an'ny fivarotana fitaovana manjelatra, dia matihanina kokoa isika. Matihanina tokoa isika satria manokan-tena. Isika dia mandinika ny famirapiratry ny vokatra ， ny fahamarinan'ny vokatra. Miorina amin'ny fiantohana ny brigant mamirapiratra ...
Inona no antonony vita amin'ny fotoluminescent firy?
Pigmary Photoluminescent: antsoina koa: glow ao anaty vovony maizina, pigment mamirapiratra, vovoka fluorescent Ny pigment-na-java-manandavana ho an'ny jiro be dia be dia afaka mamoaka hazavana amin'ny alàlan'ny tsindrona ny jiro samihafa hita ary azo ampiasaina matetika. Ny vokatra dia tsy misy singa manjelanjelatra ary mety hiparitaka mihitsy aza ho toy ny additive eo amin'ireo mpiasa mangarahara toy ny coating, tinta, loko, plastika, cereal, vera, fibre hampiasa ny famoahana ireo ...